Ururka B.R Puntland: “Axmed Madoobe Garoowe wuxuu u tagay hub iyo Ciidamo…” | KEYDMEDIA ONLINE
Ururka B.R Puntland: “Axmed Madoobe Garoowe wuxuu u tagay hub iyo Ciidamo…”
Gaalkacyo (KON) - Ururada Bulshada Rayidka ee deegaanada Maamulka Puntland ayaa ku eedeeyeen Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) in deegaanada Puntland u tagay sidii Hub iyo Ciidamo Maamulkiisa ka mid noqda uu kaga soo galbin lahaa deegaanada Maamulkaasi si uu u gaarsiiyo Magaalo Xeebeedka Kismaayo.
Daahir Cumar Siyaad oo ah Afhayeenka Ururada Bulshada Rayidka deegaanada Maamulka Puntland ayaa wuxuu ciidamadaasi ku tilmaamay inay qeyb ka noqonayaan ciidamada haantaa dhibaatoyinka Kufsiga iyo Boobka u geysta Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Magaalada Kismaayo ee Xarunta gobolka Jubada Hoose.
“Adeer, Axmed Madoobe Ciidamo ayuu raadinayaa Faroole-na waxa uu rabaa inuu ciidamo ugu deeqo, Ciidanka Kismaayo ka dagaalaamaya waxay u badan yihiin Kilinka Shanaad iyo NFD, Ciidamo Soomaaliyeedna ma ahayn Puntland inuu ciidadmo ka helo ayuu u yimid..” ayuu yiri Daahir Cumar.
Afhayeenka ayaa hadalkiisa intaas ku daray in Faroole Mooshin kaga furan yahay maamulkaasi “Oday wiilkiisa raba in Kismaayo uga dhinto oo diyaarad iyo Doon lagu qaado ma jirto marka taa waaye tan uu Axmed Maadoobe ugu yeeray, hada ayeeba ka badanyihiin Boqolaalo inta laga qaaday Degaamada Puntland oo Maydkoodi xataa la heynin” ayuu mar kale yiri Daahir Cumar Siyaad.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Ciidamada Puntland gadood ay sameeyeen bilihii ugu dambeeyey ay ka soo dageen Agagaarka Buuraha Galgala iyagoona qabsadeen goobo ay ka mid ahaayeen Bankiga, Dekadda, Garoonka Diyaradaha iyo waliba banaanbaxyada looga horjeedo Maamulka Faroole ee ka dhacay Gaalkacyo.
Hadalkan ka soo baxay Ururada Bulshada Rayidka Puntland ayaa ku soo beegmaya xili Xildhibaano, Siyaasiyiin iyo Waxgarad kale ku eedeeyey Faroole inuu hurinayo dagaalada ka holcaya gobolada Jubooyinka.